डा. अनुपमा शर्मा : योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? यस्ता छन् उपचार विधि - Complete Nepali News Portal
डा. अनुपमा शर्मा : योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? यस्ता छन् उपचार विधि
अधिकांश महिला योनिबाट सेतो पानी बग्ने समस्याबाट पीडित छन् । योनि र पाठेघरमा हुने संक्रमणले महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ । सेतो पानी बग्न थालेमा महिलाको योनिमा संक्रमण बढ्न थाल्छ । यस्तो समस्याको समयमै उपचार गरिएन भने पाठेघरको क्यान्सरसमेत हुन सक्छ ।
यहि कुरालाइ मध्यनजर गर्दै आज हामी तपाईलाई स्त्रिरोग विशेषज्ञ डा. अनुपमा शर्मासँग सेतो पानी बग्ने समस्या छ ? यस्ता छन् उपचार विधि , भन्ने विषयमा गहन र महत्वपूर्ण कुरा लिएर आएका छौँ । आशा छ तपाईलाई अवश्य मन पर्ने नै छ ।
यूवराज्ञी राजगद्दीमा बस्ने संसार चकित पार्ने र नव युवराज हृदयन्द्र शाह राजा बन्ने ग्रह। माता सबिता
सबिता सरु शर्मा आचार्य २०४५ सालमा धनकुटामा जन्मिनु भएको हो। उहालाई ७ वर्ष को उमेर देखि नै अलौकिक शक्तिको ज्ञात भएको हो। माताका वाणीहरु, मानिसले घमण्ड र रीष गर्न छाडौ ऑफै ऊन्नति र प्रगति हुन्छ, हरेक मानिसको जीवन जिउन साँच्चै काहां सजिल छ र? एक न एक तनाव ले सधै पछि लागेर पछ्याईरहन्छ।, कसैले बोलेर मात्र हुदैन काम गरेर पनि मन जित्न सक्नुपर्छ।, जो व्यक्ति आफनो रिसलाई आफनो टाउकोमा खन्याउन सक्षम हुन्छ ,उसलाई अरुको रिसबाट बच्नुपर्दैन।
तपाइलाइ थाहा नभइ पनि हुन सक्छ ब्रेन ट्युमर ! के...
कोरोना संक्रमणको अवस्था कस्तो छ ? कसरी बच्न सकिन्छ ?...
आफ्ना छोराछोरी लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा फसेको कसरी थाहा पाउने ?...
बच्चा जन्मिने बित्तिकै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु, नवजात शिशुको स्याहार कसरी...
अब नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितमा औ’षधि परीक्षणको तयारी